Ikhadi Lebhizinisi Elihlukile ... i-Chip | Martech Zone
Ngale ntambama, ngibe nomhlangano omuhle no umeluleki webhizinisi uHarry Howe futhi wethu umenzeli womshuwalense webhizinisi, UJoe Glaser. Bekuwumhlangano omuhle ngoba uJoe noHarry bangamaciko ekubhaleni phansi zonke izinhlobo zobungozi nomshuwalense emhlanganweni omfushane lapho bengitshela khona okufanele ngikwenze futhi ngiyabethemba ukuthi bazokwenza.
Siphatha umshwalense ngezizathu eziningi… noma ngabe ukwebiwa kwemishini noma ukulimala, ukumangalelwa, umshuwalense wokuhamba, umshuwalense wokuphila, njll. Empeleni, amanye amaklayenti ebhizinisi esiwafunile ukuthi sibambe inani elincane lomshwalense webhizinisi ukuvikela zombili inkampani yabo neyethu. Ibhizinisi elincane elilingana nathi lingangcwatshwa kalula swoop esisodwa esibulalayo uma singenawo umshwalense… ngakho-ke siyayibalekela ingozi bese sikhokha isikweletu unyaka nonyaka.
Ngingumlandeli omkhulu wamakhadi webhizinisi ayingqayizivele futhi uJoe ukhiphe inkampani yakhe yakamuva futhi enkulu kakhulu ebengicabanga ukuthi ihlukile futhi kufanele ishiwo. Kuyi-chip poker yangempela enemininingwane yenkampani kolunye uhlangothi nemininingwane yokuxhumana kaJoe ngakolunye uhlangothi. I-poker chip… ye-ejensi yomshuwalense… ayigugu!
I-PS: Uma uyinkampani ese-Indiana futhi udinga izeluleko eziqinile, ngincoma kakhulu uJoe Glaser kanye ne Thompson Iqembu. Mnikeze ucingo ku-317.514.7520.
Tags: ikhadi lebhizinisiikhadi lepoker poker chipumshuwalense webhizinisiuJoe Glaseri-poker chipthompson iqembu